Guddida Xaqiiqa Raadinta Dilka Dr Doolaal, oo Baadhitaan Dheer ka Dib Soo Saartay Warbixin Faahfaahsan – Rasaasa News
Aug 7, 2009 Assasination, Dr. Dolal, Jwxo, murder, ONLF
Guddida Xaqiiqraadinta Dilkii Dr Maxamed Siraad Doolaal, ayaa waxay soo gabagabaysay warbixin dheer oo ay ka soo diyaariyeen qaabkii uu ku dhintey Dr Maxamed Siraad Doolaal, meeshii lagu diley iyo dadkii dilay. Warbixintan ayaa ka jawaabeysa Su aalaha kala ah;
Cidda dishey Dr Doolaal, Sababta iyo meesha lagu diley, meesha lagu aasey iyo waliba ciddii ugu horeysey ee ogaatey dilikiisa iyo ciddii meydkiisa sawirka ka qaadey
Dr. Dolal, oo ahaa ninka ugu caansanaa marka laga hadlayo halganka ay waday Jabhada Ogaden, ayaa waxaa uu ahaa ninkii dhidibada u taagay ururka, waxaa uu ahaa nin uu halganku dhab ka yahay, uguna adeegay aqoontiisa halganka.
Tan iyo intii la dilay Dr. Dolal ayey taageerayaalkiisu aad uga niyad jabeen halganka iyaga oo u arkay in raga Dr. Dolal halganka kula jiray ayna ahayn dad daacad u ah halganka, isla mar kaasna ku tuhmay in ay ka dambeeyaan dilka Dr. Maxamed Siraad Dolal.
Hadaba warbixintan, ayaa waxay taabanaysaa wadnayaasha dadka jecel halganka iyo ehelada Dr. Dolal, waxayna ka Jawaabaysaa su,aalo aan hore looga Jawaabin. Warbixinta ayaa wax yeelo wayn u keeni karta Jabhada Ogaden oo awal horeba uu kala jab ka dhextaagnaa.
Warbixintu waxaa ay qortay in dilka Dr. Maxamed Siraad Dolal uu si toos ah uga dambeeyey Maxamed Cumar Cismaan oo ay ka qayb qaateen 75 nin oo u badan beeshiisa. Waxaa kale oo ay warbixintu magac dhawday saddex nin oo ka tirsan golaha dhexe ee ururka ONLF, oo iyagu ogaa falka dilka ah.
Waxaa kale oo warbixintu ay magac dhawday ragii watay horimaha ciidanka ah ee dilay Dr. Dolal. Waxaa wax aad looga naxo ah xidhiidhka u dhaxeeya masuuliyiin ururka ONLF ka tirsan iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka kilalka, oo si wada jir ah uga shaqeeyey dilka Dr. Maxamed Siraad Dolal.
Waxa kale oo wabixinta ku jirta in ay ka qayb qaateen dilka, dad aan ka tirsanayn Jabhada oo si qabiil ah ula shaqeeya Jabhada.
Ugu dambayn warbixintu waxaa ay sheegayaa, goobta lagu dilay, qalabka laga qaatay iyo sida quudhsiga leh ee uu diiday in uu warsiiyo isaga oo erayadii ugu dambeeyey ee afkiisa ka soo baxa ay ahaayeen “Walee Idinkuna igama dambaysaan”.
Warbixintu waxaa ayy sheegtay in ayna daabiici karin magacyadada dadka markhaatiga ah, waxayna dib ka soo saari doontaa kolka ugu horeysa ay dadkaasi tagaan meel ay amaan ku yihiin, waxaa kale oo uu gudigu soo saari doonaa talo bixin ku saabsan wax ay dantu ugu jirto halganka iyo ehelada Dr. Dolal.
Warbixinta oo faahfaahsan halkan ka akhriso